Filtrer les éléments par date : jeudi, 15 juillet 2021
jeudi, 15 juillet 2021 16:19
IDA20 : Naharitra ora telo ny fihaonana tany Abidjan
Notanterahana tao amin’ny Sofitel Hôtel Ivoire any Abidjan, Côte d’Ivoire, ny fihaonana antampon’ny Banky Iraisampirenena ho fandrafetana ny sorabola andiany faha-20 ampiasain’ny Fikambanana iraisampirenena momba ny fampandrosoana na IDA20.
Naharitra ora telo ity fihaonana, izay nanomboka tamin’ny 1 ora tolak’andro aty amintsika ity.
Nandray anjara amin’ity fihaonana ity ny filohan’ireto firenena afrikana voatanisa manaraka ireto : Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Mauritanie, Madagascar, Mozambique, Niger, Nigéria, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Togo ary Ouganda.
Anisan’ireo any an-toerana hatry ny omaly, noho izany, ny filoha Andry Rajoelina.
Natao hitsinjovana ny fiharenandohan’ireo firenena mahantra sy an-dalampandrosoana noho ny kirizy ara-pihariana ateraky ny Covid-19, sy ho tosika amin’ny fampivoarana azy ireo io fihaonana IDA20 any Abidjan io.
jeudi, 15 juillet 2021 16:17
Fitsarana miaramila 2021 : Hanomboka ny farany volana Jolay izao
Hanomboka ny farany volana Jolay izao ny "fitsarana miaramila 2021".
Namory ireo Mpitantsoratry ny Biraon’ny Fiarovana eny anivon’ny Distrika manerana ny Nosy ny Talen’ny Fanompoam-pirenena sy ny Fiandry, ny Jeneraly Rasolonirina Roger, omaly, teny Andohalo - Antananarivo mba hisian’ny lamina ao anatin’ny fanatanterahana ny fanisana sy ny fitsarana miaramila.
Narafitra nandritra ity fivoriana ity ny tetiandron’ny fitsarana miaramila izay haseho ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena anio mandritra ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny Fitsarana miaramila.
jeudi, 15 juillet 2021 16:12
Raharaha « Jarisone » : Nomena valisoa 4 tapitrisa Ariary ireo nahasambotra azy
Natolotra ny talata 13 jolay 2021, teo anatrehan’ny OMC (Organe Mixte de Conception) ny lelavola 4 tapitrisa Ariary ho an'ireo niantsehatra tamin'ny fisamborana an'i Jarisone, voatondro ho dahalo rain-dahiny ka nanaovana filazana fikarohana tao amin'ny faritra Sofia.
Nanomana lelavola 2 tapitrisa Ariary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena , ny Jeneraly Richard Ravalomanana, homena izay manome vaovao marimpototra momba an'i Jarisone na koa mahasambotra azy, nanomana 1 tapitrisa Ariary ihany koa ny Komandin'ny Zandarimariam-pirenena, ary 1 tapitrisa Ariary avy amin'ny Governoran'ny faritra Sofia, ny Jeneraly Lylyson René de Rolland.
Ny Ben'ny Tanàna voafidy tao Antsiradava no nandray izany tamin'ny anaran'ireo nahasambotra an’i Jerison.
jeudi, 15 juillet 2021 16:04
Distrikan’i Fandriana : Hanome alalana ny famadihan-drazana
Nanao fanambarana iombonana ireo Ben’ny Tanàna ao amin’ny Distrikan’i Fandriana, Faritra Amoron’i Mania fa “tsy maintsy hotohizana ny famoahana fahazoan-dalana hanao famadihana ato amin’ny Kaominina tsirairay ato anatin’ny Distrikan’i Fandriana”.
“Noho ny fitakian’ny Vahoaka tsy hay tohaina” sy ny “Noho ireo fahazoan-dalana efa navoaka teo aloha”, no voalazan’ny fanambarana fa antony.
jeudi, 15 juillet 2021 15:40
15 juillet : Journée mondiale des compétences des jeunes.
jeudi, 15 juillet 2021 15:39
Alimentation en Eau dans le Sud (AES) : Nafindra ao Ambovombe ny foibeny
Hafindra ao amin’ny Distrikan’i Ambovombe Faritra Androy, ny Foiben’ny Alimentation en Eau dans le Sud (AES) raha toa ka teto Antananarivo izany hatrizay. Izany dia ho fampiharana ny Didim-pitondrana laharana 6707/2021 tamin’ny 04 martsa 2021.
Isan’ireo paikady napetraky ny Fitondram-panjakana hanarenana sy hanatsarana ny AES, ary voasoritra ao anatin’ny Drafi-panarenana mikasika izany famindràna ny Foiben’ny AES any Atsimo mba hanakaikezana ifotony ny faritra tena ahitana olana, ary hahamora kokoa ny fitadiavana vahaolana mikasika ny famatsian-drano.
Tsy mbola manana Tale jeneraly ny AES fa Tale Jeneraly mpisolotoerana dia ny Jeneraly Rasolomanana Hajatiana.